एउटा चिकित्सककाे कथा : पैसा कमाउने रहर भए बिदेश जान्थे हुँला !
जनतापाटी २५ माघ
काठमाडौं । घरपरिवार गाउमै बस्छन् । काकाहरु सोनाम साङ्वो र खेटुक पनि गाउँमै आमजी पेशागरी बसेका छन् । उनले पनि काकाहरुकै बिंडो धान्ने प्रयास गरे ।
बुद्ध धर्मको अनुयायी हुनाले आयूर्वेदिक बिज्ञानतर्फ उनको ठुलो आत्मबिस्वास छ । उनका बाबाआमा गाउँमै परम्परागत खेतिपातिमा रमाईरहेका छन्, तर उनी भने, आयूर्वेदिक आमजी व्यवसाय प्रर्वद्धन तथा यसको उत्थानमा लागि परेका छन् ।
उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउपालिकाको सबैभन्दा पीछडीएको गाउँ हो ‘ध्ये’ । साविक सुर्खाङ गाविस वडा नम्बर ९ ध्येमा करिव ४ दशकअघि जन्मिएका आयूर्वैदिक चिकित्सक डा. तेन्जिङ धार्के गुरुङ यतिबेला काठमान्डौंमा बसेर रोवा रिग्पा (स्वास्थ्य बिज्ञान)को छलाङ मार्दैछन् ।
उनी ५ कक्षा सम्म गाउँकै सरकारी स्कुलमा पढे । त्यसपछि सिटीभिटीबाट मान्यताप्राप्त लोमान्थाङकै एक आमजी स्कुलमा एचए तहको कोर्ष पूरा गरे ।मुस्ताङबाट आयुवैदिक चिकित्सा कोर्ष सुरु गरेका उनी भारतमा स्नातक पास गरी गाउ नफर्की उतैतिरबाट राजधानी काठमाडाै छिरे ।
सुरुवातमा उनले काठमान्डौ स्यंम्भूमा रोवा रिक्पा (स्वास्थ्य बिज्ञान) अन्तर्गत एक चिकित्सालयमा डक्टर भएर काम गरे । त्यहा मनाङ, मुस्ताङ र डोल्पा जिल्लाका धेरै मानिसहरुको बसोवास छ ।
त्यसैले उनले स्यम्भुमै फेन्दे हिमालयन सोरिग आयूवैदिक चिकित्सालय खोल्न पुगे । एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दे गरेका उनले ५ वर्षअघि धरान, बिर्तामोड, पोखरा र स्याङ्जामा शाखा बिस्तार गरे । मुस्ताङमा पनि थुप्रै परम्परागत पद्धतीबाट उपचार गर्ने आमजी रहेपनि काठमान्डौं आएर अफिसियल चिकित्सालय खोल्ने उनी एकमात्र युवा हुन् ।
बिद्यार्थी पढाई सकेपछि उनले गाउँ छोडेर काठमाडौंलाई कार्यस्थल बनाएका हुन् । गृह जिल्लालाई उनले चटक्कै माया मारेका छैनन् । उनले अहिले पनि मुस्ताङलाई उक्तिकै माया गर्छन् ।
गाउँमा परिवार छन्, उनले खेलेको, पढेको हुर्किएको भुगोल उनी सम्झन चाहन्छन् । आमजीमा बिषयमा डक्टर उर्तिर्ण गरेका उनी मुस्ताङ बस्न नभ्याएपनि वर्षेनी आयूबैदिक शिविर लिएर दुरदराजका गाउमा पुगेर आफ्नो सीपको सेवा गाउँले समक्ष पूर्याउँछन् ।
‘आमजी सेवामा पूर्णसन्तुष्ट छु । देशमा बसेर जिवन चलाउने देखि बिरामी सेवा गर्ने सोचाईमा छु,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा कमाउने रहर हुन्थ्यो भने, बिदेशी जान्थे हुँला ।’ हिमाली तथा उच्चपहाडी लेंकमा पाईने बन्यजटिबुटीलाई प्रशोधनगरी उनले बिभिन्न रोग निको पार्ने औषधि तयार गर्छन् ।
‘नेपालमा भएका जटिबुटीहरु समूचित प्रयोग हुन सके राष्ट्रका लागि समेत फाईदा पुग्छ,’ उनले भने, ‘रोेवा रिग्पाले करिव ७० बिधाका जटिबुटी मिश्रित औषधि तयार गर्छ । यसरी तयार पारिएका औषधि छिमेकी देशहरुमा समेत पैठारी हुन्छ ।’
उनले नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी लेकमा पाईने यार्सागुम्बा, पाँचऔले, निरमसी आदी जटीबुटी नेपालमै उपयोग गर्न सकिने बताए । आयूबैदिक डा. तेन्जिङले आयूबैदिक बिषय पढेका करिव २ दजर्नलाई रोजगार समेत उपलब्ध गराएका छन् । राजधानी बाहिर उनले खोलेका शाखामा स्वास्थ्य परिक्षणका लागि महिनाको २ पटक त्यहा पुगेर सेवा दिन्छन् ।
यसरी त्यहा पुग्दा करिव ५ सय बढी बिरामीले सेवा प्राप्त गरेको उनी बताउछन् । ‘आयूर्बैदिकतर्फ पछिल्लो समय मानिसको बिश्वास बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य परिक्षण गराएर गएका बिरामी फर्किफर्कि आउछन् र रोग निको भएको कुरा सुनाउँछन् । जसले गर्दा रोवा रिग्पामा सफल भएको छु जस्तो लाग्छ ।’
आमजी अर्थात स्वास्थ्य बिज्ञान उपचार पद्धती नेपालमा २५ सय बर्षअघिबाट सुरु भएको डा. तेन्जिङ धार्केले बताए । यसलाई भोटे भाषामा रोवा रिग्पा–प्राकृतिक उपचार भनिएको हो । नेपालमा सन् २०१७ को तथ्याङ्क अनुसार करिव ७० वटा जति आयूबैदिक चिकित्सालय छन् भने गाउँ गाउँमा बसेर उपचार गर्ने आमजीहरुको लिपि तयार भैईनसकेको उनले जानकारी दिए ।
काठमाडौंसहित ५ स्थानमा आयूबैदिक शाखा सुरु गरेका डा. तेन्जिङले यो सेवालाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यसहित ७७ वटै जिल्लामा रोवा रिग्पाकेन्द्र शाखा बिस्तार गर्नेे लक्ष्यका साथ अघि बढेका छन् । आयूवैदिक उपचार पद्धतीबाट स्त्री रोग तथा मानिसको संम्पूर्ण पेट सम्वन्धि देखा पर्ने रोगहरुको उपचार हुने उनले बताए ।
उनका अनुसार बिरामीको नाडी परिक्षण, दीर्घरोगीको बिना साईड ईफेक्ट सफल उपचार र प्राकृतिक उपचारका माध्यमले बिरामीलाई उपचार गराईने उनले जानकारी दिए । ‘सयौ वर्षअघि हेल्थपोष्ट, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य अस्पताल र स्वास्थ्य शिक्षा थिएनन्,’ उनले भने, ‘त्यस समय बुद्धिस बेद, रोवाभेद अनुसार स्थानीय जटीबुटीको उपयोग गर्दै प्राकृतिक उपचार गराईन्थ्यो ।’
यूवा डा. तेन्जिङ धार्केले निजि आयूर्बैदिक चिकित्सालयमा मात्र खोलेका छैनन्, उनले नेपालमा रोवा रिग्पा प्रर्वधनमा समेत लागिपरे । नयाँ पुस्तालाई पछिसम्म यो व्यवसाय टिकाईराख्न एकेडेमीक ढङ्गले सञ्चालन गर्दै स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालन गर्न काठमाडौंबाट पहल सुरु गरे ।
यसका लागि रोवा रिग्पामा आवद्ध उनका केही सहमकर्मी मिलेर सन् २०१६ मा रोवा रिग्पा एशोसियसन खोले । उनी एशोसियनका फाउन्डर समेत हुन् । यहाँ शिक्षा लिन आउदा प्लस टू पास गरेको हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
एशोसियसन सुरु गर्दा धेरै कठिनाई झेल्नु परेको सम्झदै उनले त्रिविले मान्यता नदिएपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट एशोसियनले मान्यताप्राप्त गरेको उनले सुनाए । हाल रोवा एकेडेमीमा ५० जना बिद्यार्थी रहेको र सन् २०२१ सम्ममा एकेडेमीले रोवा रिग्पा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उनले जानकारी दिए ।